၁ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ သည် မြန်မာဘာသာစကားအရ တစ်ဟု ခေါ်သည်။ မျိုးပြပစ္စည်း တခုခုနှင့် တွဲကာ၊ တစ်ခု၊ တစ်ကောင်၊ တစ်ယောက်ဟု ရေတွက်ရသည်။ ၁ ကို ပထမဟုလဲ ခေါ်သည်။ သဘာဝကိန်း တလုံး ဖြစ်သော ၁ ရှေ့တွင် သုည အလျင်လာပြီး၊ ၁ နောက်တွင် ၂ လိုက်သည်။ သုညကို အပေါင်းလည်းမဟုတ် အနုတ်လည်းမဟုတ် သတ်မှတ်ထားရာ၊ ၁ သည် ပထမဆုံးနှင့် အငယ်ဆုံး အပေါင်းကိန်း ဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာ၊ ယူနစ်တို့ကို တစ်ကစ အခြေခံထား တွက်ချက်ကြသည်။ တခါတရံ သဘာဝကိန်းများ၏ အနန္တကိန်းစဉ်တန်း၏ အဦးအစ အဖြစ် မှတ်ယူသည်။ အချို့သတ်မှတ်ချက်များတွင် ၁ ကို ဝ နောက်မှ လိုက်သော ဒုတိယ သဘာဝကိန်းဟု ယူဆသည်။
Script error: The function "10to2" does not exist.2
Script error: The function "10to3" does not exist.3
Script error: The function "10to8" does not exist.8
Script error: The function "10to12" does not exist.12
Script error: The function "10to16" does not exist.16
အာရဗီ၊ ကာဒစ်၊ ပါရှန်း၊ စင်ဓီ၊ အူရဒူ
အာသံ & ဘင်္ဂါလီ
၁ ၏ အခြေခံကျဆုံး သင်္ချာဂုဏ်သတ္တိမှာ မြှောက်ဂုဏ် ဖြစ်ကာ၊ ၁ ကို မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းဖြင့် မြှောက်မြှောက်၊ ထိုကိန်းကို ပြန်ရသည်။ မည်သည့်ဂုဏ်သတ္တိမှမဆို ၁ ကို ဖယ်ရှား၍ မရပေ။ အဆင့်မြင့်သင်္ချာတွင်၊ ကိန်းတခု မဟုတ်လျှင်ပင် မြှောက်ကိန်းကို မကြာခဏ ၁ ထားကြသည်။ ၁ ကို သုဒ္ဓကိန်းတလုံးဟုလည်း မယူဆကြချေ။ ၂၀ ရာစုအလယ် ရောက်သည်ထိ အငြင်းပွားမှုအချို့ ရှိနေသေးသည်။
တစ်သည် အင်္ဂလိပ်လို တခါတရံ unity ဟု ညွှန်းပြီး၊ အဦးဆုံး သုညမဟုတ်သော သဘာဝကိန်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သုညနောက်က လိုက်သော အပေါင်းကိန်း ဖြစ်သည်။
သင်္ချာဝယ် တစ်ကို မည်သည့်ဂဏန်းဖြင့် မြှောက်သည်ဖြစ်စေ ထိုဂဏန်း ပြန်ရကြောင်း အများသိပြီး ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အဖြစ်၊ ၁ သည် သူ့ကိုယ်သူ ဆခွဲကိန်း ဖြစ်ကာ၊ သူ့ကိုယ်သူ၏ နှစ်ထပ်ကိန်း၊ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း ဖြစ်သည်။ သုံးထပ်ကိန်း တင်၍ ရသလို၊ သုံးထပ်ကိန်းရင်း ပြန်ရှာ၍လည်း ရသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းဖြင့် မြှောက်သော်လည်း ထိုကိန်းပင် ပြန်ရသဖြင့် empty product ဖြစ်စေသော ရလဒ် ဖြစ်သည်။ ring theory ဟု သတ်မှတ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - History of the Hindu–Arabic numeral system
နံပါတ် ၁ သည် အင်္ဂလိပ်လို 1 ဖြစ်ကာ၊ အနောက်တိုင်းတွင် ယနေ့ အသုံးပြုသော 1 အတွက် ဂလဖ် glyph မှာ ထိပ်တွင် အကောက်ပါပြီး၊ တခါတရံ အောက်ခြေဝယ် အလျားလိုက် မျဉ်းတကြောင်း ပါတတ်သေးသည်။ ထို 1 ရေးထုံးကို ခြေရာ ပြန်လိုက်သော် ရှေးခေတ် အိန္ဒိယ၏ ဗြဟ္မီ အရေးအသားတွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဒေါင်လိုက်မျဉ်း တကြောင်းတည်းသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်တွင် ပညာတတ်များ အာရဗီလို ရေးသားသော အာရဗီ ကိန်းဂဏန်းများမှတဆင့် ဥရောပသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။
အချို့တိုင်းပြည်များတွင် ထိပ်မှ အချွန်သည် မျဉ်းဖြောင့် ပြီး ရှည်ထွက်လာရာ၊ အခြားတိုင်းပြည်များက7အတွက် အသုံးပြုသော ခဲစာလုံးနှင့် မှားယွင်း ရှုပ်ထွေးကြသည်။ ထိုအခါ ထိပ်ကို မျဉ်းဖြောင့် ရှည်ထွက်သော စတိုင်ကို အသုံးပြုသော ဖောင့်စာလုံးမျိုးတွင်7ကို အလယ်၌ 1 နှင့် ကွဲပြားသွားစေရန် အလျားလိုက် မျဉ်း တကြောင်း ထပ်ထည့်ထားလေသည်။ ထိပ်ရှည် 1 ကို မသုံးသော ဖောင့်စာလုံးတွင်7အလယ်၌ မျဉ်း ထည့်လေ့ မရှိချေ။ မြန်မာတွင် ဤ ပြဿနာမျိုး မရှိသော်လည်း၊ ၁ သည် ၀ နှင့်လည်း ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရေးတွင် ၈ ကို မျက်ဆန်ထည့်ရေးတတ်ကြသော်လည်း၊ မျက်ဆန်မထည့်သော ဖောင့်ဝယ် ၈ သည် ၁ နှင့်လည်း မှားနိုင်သည်။ ၁ ပုံစံ ခဲစာလုံးသည် အပေါ် ၉၀° လှည့်လိုက်ပါက မြန်မာအက္ခရာ ပစောက်၊ ထိုမှ အနောက် ၉၀ ဒီဂရီထပ်လှည့်လိုက်ပါက င၊ အောက်သို့ ၉၀ ဒီဂရီ ထပ်လှည့်ပေးလိုက်ပါက ဂငယ် အသီးသီး ရရှိသည်။ တရုတ်လို 一 သည် အင်္ဂလိပ် 1 နှင့် အလဲအထောင် ဆန့်ကျင်လျက် ရှိသည်။
ဤသို့ အက္ခရာများနှင့် မျဉ်းတပြေးအရွယ်အစား ဖြစ်နေလျှင် x-height, x အမြင့်ဟု ခေါ်သည်။
ဗင်းနစ်မြို့မှ ၂၄ နာရီလည်ပတ်နေသော နာရီစင်သည် ၁ နေရာအတွက် J ကို သုံးထားပုံ
ရှေးက လက်နှိပ်စက်ဟောင်း အတော်များများတွင် 1 ကိုရိုက်ရန် သင်္ကေတသတ်သတ် မရှိချေ။ ယင်းအစား l (အယ်လ်အသေး) ကို သုံးသည်။ အလှဆင်သည့်အနေဖြင့် လိုလာသည့်အခါ J အကြီးကို ရိုက်ကြလေသည်။
1 × x 1234567 8910
1 ÷ x 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.16 0.142857 0.125 0.1 0.1
x ÷ 1 1234567 8910
1x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polyethylene terephthalate ကို ခွဲခြားရန် ပြန်လှည့်ပတ်ရာ၌ သုံးသော ရီစင်ညွှန်းကုတ် resin identification code။
မြောက်အမေရိကန် နံပါတ်ပလန်ဒေသအတွက် အမေရိကန်၊ ကနေဒါနှင့် ကရစ်ဘီယံ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သော ITU နိုင်ငံတကာ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ နိုင်ငံကုတ်။
ဘိုင်နရီကုတ် binary code ဆိုသည်မှာ မည်သည့် ဒေတာအမျိုးအစားမဆို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ကွန်ပျူတာများတွင် အသုံးပြုသည့် ၁ နှင့် ၀ အတွဲ ဖြစ်သည်။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း များစွာမှာ၊ ၁ သည် ဖွင့်သည် on အတွက် တန်ဖိုး ဖြစ်ကာ၊ လျှပ်စစ် စီးနေသည့် အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ် ဘာသာစကားများစွာတွင် Boolean data type ဖြစ်သော true ၏ ကိန်းတန်ဖိုး။
၁ သည် ခေါင်းစဉ် အစ Start of Header ၏ ASCII ကုတ်။
ဒိုင်မင်ရှင်းမဲ့ အရေအတွက်များ Dimensionless quantities ဆိုသည်ကို ဒိုင်မင်ရှင်း ၁ ၏ အရေအတွက်များဟုလည်း သိကြသည်။
၁ သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ အက်တမ်နံပါတ် ဖြစ်သည်။
+၁ သည် ပိုစီထရွန်များ (positrons) နှင့် ပရိုတွန်များ၏ လျှပ်ဆောင် (electric charge) ဖြစ်သည်။
အလှည့်မှန်ဇယား၏ အုပ်စု ၁ တွင် အယ်လ်ကာလီ သတ္တုများ ပါဝင်သည်။
အလှည့်မှန်ဇယား၏ ပထမအလှည့်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ် ဟူသော ဒြပ်စင် နှစ်မျိုးသာ ပါဝင်သည်။
စီရက် Ceres ဂြိုဟ်ပုတွင် ၁ စီရက် ဆိုသော ဂြိုဟ်သိမ်ရှိပြီး၊ ၎င်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ပထမဆုံး ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှား ဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။
ရောမကိန်း I သည် ဂြိုဟ် သို့မဟုတ် ဂြိုဟ်သိမ် တလုံး၏ ပထမဆုံး တွေ့ရှိသော ဂြိုဟ်ရံလအတွက် မကြာခဏ သတ်မှတ်သည်။ ဥပမာ နက်ပကျွန်း ၁၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထရိုင်တန်လ ဖြစ်သည်။
ပလိုတီးနပ် Plotinus အပါအဝင် အခြားသော ဒဿနိကဗေဒပညာရှင်များ အယူတွင်၊ The One သည် သက်ရှိအားလုံး၏ အရင်းမြစ် ဖြစ်ကာ၊ အတုမရှိသော နံပါတ်တစ် ဖြစ်သည်။ ဖီလို အလက်ဇန္ဒြီးယား(၂၀ BC – AD ၅၀)က နံပါတ်တစ်ကို ဘုရားသခင်၏ နံပါတ်၊ ကိန်းဂဏန်းအားလုံးအတွက် အခြေခံဟု မှတ်ယူသည်။("De Allegoriis Legum," ii.12 [i.66]) ပိုက်သဂိုးရပ်ဆန်ဆန်တွေးခေါ်ကြသော ဂယ်ရာဆာမှ နီကိုမချပ်ကမူ တစ်သည် ကိန်းမဟုတ်၊ သို့သော် ကိန်း၏ အရင်းမြစ်ဟု အခိုင်အမာ ဆိုသည်။ နံပါတ် ၂ သည်ပင် အခြား၏ အရင်းမြစ် ပါဝင်နေသည်ဟု သူက ယုံကြည်သည်။
ဘေ့စ်ဘောအမှတ်ပေးရာတွင်၊ နံပါတ် ၁ ကို ပစ်သူ pitcher သို့ ပေးရသည်။
ဘောလုံးအသင်းတွင် ကျောနံပါတ် ၁ ကို ဂိုးစောင့် ဖြစ်သော ဂိုးသမားကိုသာ ပေးလေ့ရှိသည်။
ရဂ်ဘီ လိဂ်အသင်းများ ပြိုင်ပွဲအများစုတွင် စပေးသည့် ကျောပြည့် fullback သည် ဂျာစီနံပါတ် ၁ ကို ဝတ်သည်။
ရဂ်ဘီသမဂ္ဂတွင် စပေးသည့် ခေါင်ထိပ်လူ loosehead prop က ဂျာစီနံပါတ် ၁ ကို ဝတ်ဆင်သည်။
အမျိုးသား ဟော်ကီလိဂ်အသင်း ကစားသမားများ အသုံးပြုရန် ၁ သည် ခွင့်ပြုထားသော အနိမ့်ဆုံး နံပါတ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ၀ နှင့် ၀၀ အသုံးပြုခြင်းကို လိဂ်က တားမြစ်သည် (အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနံပါတ်မှာ ၉၈ ထိသာ ဖြစ်သည်)။
၁ သည် အမေရိကန် ဘောလုံး၏ အဆင့်အများစုတွက် သုံးရန် ခွင့်ပြုသော အနိမ့်ဆုံးနံပါတ် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဘောလုံးလိဂ်အသင်း မူဝါဒအရ၊ တိုက်စစ်မျဉ်းစောင့် offensive linemen နှင့် ခံစစ်မျဉ်းစောင့် defensive linemen တို့က အသုံးမပြုရ။
ဖော်မြူလာဝမ်းတွင်၊ ရှေ့နှစ် ပြိုင်ပွဲ၏ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံက ထိုနံပါတ်ကို သုံးမည်ဆိုလျှင် ခွင့်ပြုထားသည်။
အနောက်တိုင်း ပြက္ခဒိန်အရ၊ တနှစ်ကို ၁၂ လဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ တလစီ၏ ရက်အရေအတွက် မှာ မတူသော်လည်း၊ ဦးဆုံးရက်အစများသည် တူညီကြသည်။ ၁ ဇန်နဝါရီ၊ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁ မတ်၊၊ ၁ ဧပြီ၊ ၁ မေ၊ ၁ ဇွန်၊ ၁ ဇူလိုင်၊ ၁ ဩဂုတ်၊ ၁ စက်တင်ဘာ၊ ၁ အောက်တိုဘာ၊ ၁ နိုဝင်ဘာ၊ ၁ ဒီဇင်ဘာတို့ ဖြစ်သည်။
၁ ပတ်တွင် ၇ ရက် ရှိကာ၊ ၁ ရက်တွင် ၂၄ နာရီ ရှိသည်။ ၁ ရက်တွင် နေ့ ၁၂ နာရီ၊ ည ၁၂ နာရီ ရှိသည်။ တနေ့နှင့် တညကို တရက်ဟု ခေါ်သည်။ ၁ နာရီမှာ မိနစ် ၆၀၊ ၁ မိနစ်မှာ စက္ကန့် ၆၀ ရှိသည်။
လူသားများတွင် ဘီစီ ၁၊ အေဒီ ၁ နှင့် ဘီစီ ၁ ရာစု၊ အေဒီ ၁ ရာစုများအတွက် မှတ်တမ်းများ ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Weisstein၊ Eric W.။ 1 (in en)။
↑ Plastic Packaging Resins။ American Chemistry Council။
↑ Woodford၊ Chris (2006)၊ Digital Technology၊ Evans Brothers၊ p. 9၊ ISBN 978-0-237-52725-9
↑ Godbole၊ Achyut S. (1 September 2002)၊ Data Comms & Networks၊ Tata McGraw-Hill Education၊ p. 34၊ ISBN 978-1-259-08223-8
↑ Olson၊ Roger (2017)။ The Essentials of Christian Thought: Seeing Reality through the Biblical Story။ Zondervan Academic။ ISBN 9780310521563။
↑ British Society for the History of Science (July 1, 1977). "From Abacus to Algorism: Theory and Practice in Medieval Arithmetic". The British Journal for the History of Science 10 (2). Cambridge University PRess. doi:10.1017/S0007087400015375.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၁&oldid=713106" မှ ရယူရန်
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။